Delivra weputara weebụsaịtị ohuru | Martech Zone
Anyị email ahịa onye nkwado, Delivra, weputara webusaiti ohuru mara nma ta ndi ezigbo ndi enyi anyi haziri ma meputa ya. SpinWeb, na Nnwere onwe nnwere onwe. Delivra bụ onye nkwado nke Martech Zone maka ọnwa 3, anyị nwere mmasị ịrụ ọrụ na ndị ahịa a raara onwe ha nye na ndị nwere ihe ọmụma sitere na Indianapolis.
Usoro mgbasa ozi email nke Delivra na-enye atụmatụ dị iche iche dabara na mkpa nke ndị na-ere ahịa, ndị isi C, na ndị mmepe, gụnyere njikwa Ndepụta, onye nchịkọta WYSIWYG, Ngalaba, Nhazi, Ndepụta & Nkwupụta, Mwepụta, API Njikọ ọnụ, Njikọ SMS, njikwa akaụntụ, Ọrụ imepụta na alo.
Saịtị ahụ kwụpụrụ na sọftụwia ndị ọzọ dị ka saịtị Ọrụ, na-enye echiche dị mfe na ngwaahịa na onyinye ọrụ nke Delivra. Ha bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere aha dị egwu maka imere ndị ahịa ha ihe ọma, yana imepụta saịtị ọhụụ jikọtara mmadụ niile nọ jụụ, nke siri ike ma na-aga nke ọma.
Pịa na onyonyo dị n'okpuru ebe a ka ị gaa na saịtị ọhụụ mara mma ma nye ha azụmaahịa!
Tags: NdiaguỤlọ ọrụ na -ere ahịa EmailOnye na-ere ahịa Email EmailJikwaa Email MarketingOdi Ohu ohuruAhịa Email ỌkachamaraOnye nkwado